FBI-da Mareykanka Oo sheegtay in Ururo Al-Shabab ay ku jirto ay Diyaarinayaan Weerarro ka dhan ah Mareykanka. - Radio Simba 95.0 MHZ - Simbanews - Idaacada Simba
Agaasimaha FBI-da Mareykanka Christopher Wray oo hadal ka jeedinayey Golaha Congress-ka ayaa ku dhawaaqay inay jirto qatar ku soo wajahan Muwaadinka Mareykanka iyo Saaxiibadooda taas oo ka imaanaysa Kooxo Argagixisada ah oo ku kala sugan dalal Soomaaliya ay jirto sida uu xusay.
Christopher Ayaa sheegay in Kooxaha argagixisada ay ka faaideysanayaan hoos udhaca ku yimid dadaallada Mareykanka ee la dagaalanka Argagixisada kuwaas, oo Jawaab dhab ah u ahaa weerarkii khasaaraha badan ee Sebtember 11, 2001 lagu qaaday Daharihii Mataamaha ah New York waxa uuna si gaar ah uxusay in kooxha xagjiriinta ah ay dhiiranaan ka heleen ka bixitaanka Ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan.
Wray ayaa shaaciyey in Kooxaha Daacish, Al-Qaacida,Al-Shabab iyo kooxaha argagixisada ah ee laga mamnuucay Ruushka ay ka faaideysanaa Baylahda ama dayacad uu sameeyey Mareykanku islamarkaana ay ku Howllan yihiin Weerarro ay ku qaadaan Mareykanka kuwaas oo in laga hortagaa ay ubaahan tahay foojignaan dheeraad ah.
Wray kooxahaan waxaa ay raadinayaan baylahnimadeen oo ma joojinayaan isku dayaangooda ah inay weeraro Culus ay nagu soo qaadaan, sidaas daraadeed Hay’adaha sirdoonka Qaranka ee Mareykanka ayaa waxaa ay digayaan qatarta ku soo ku soo wajahan Muwaadiniinta Mareykanka.
Agaasimaha FBI oo sii hadlayey ayaa yiri “Al-Qaacida waxay ay adeegsan kartaa saldhigyadooda ciidda Afgaanistaan ​​Halkaas oo la filayo inay si dhaqsiyo badan ay uga soo maleegayso weerar lagu qaado Mareykanka”.
Agaasimuhu waxaa uu sheegay inay badan tahay in weerarkaas Argagixiso uu Mareykanka ku soo fool leeyahay inta lagu guda jiro 1-2-da sano ee soo socota iyada oo ciidamada Maraykanku guud ahaan ka baxeen dalka Afghanistan oo ah halka Kooxda Al-qaacida ay ka abaabulayso weerarkaan.
Agaasimaha FBI Christopher Wray Kooxaha hubaysan ee uu ka digay waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo Muddo 14 Sano ah dagaal kula jirtay Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed oo gacan ka helaya Saaxiibadooda Militariga oo ay ku jiraan AMISOM iyo Africom oo ah Ciidanka Mareykanka uqaabilsan Howlgalada la dagaalanka Argagixisada ee qaaradda Africa kuwaasi oo weerar cirka la beegsada Xubnaha sare ee Al-Shabab kuwaasi oo xiriir la la leh Ururka Al-Qaacidda.
Inkasto Africom ay Soomaaliya iskaga baxeen 15 January ee sanadkaan ka dib amar uusoo saaray Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump kuwaas oo hada isku meel gaar ah ugu sugan dalalka Kenya iyo Jabuuti.